राष्ट्रिय सभाका लागि दल दर्ता आह्वान, १९ जनाको कार्यकाल सकिँदै (नामावली सहित) – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
९ आश्विन २०७७, शुक्रबार ०९:१६ English
राष्ट्रिय सभाका लागि दल दर्ता आह्वान, १९ जनाको कार्यकाल सकिँदै (नामावली सहित)
निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, २७ मंसिर । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको लागि दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ । आयोगले आगामी पौष ६ गतेसम्म निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहने दललाई आयोगमा दर्ता हुन आह्वान गरेको हो । दल दर्ताका निवेदनको ढाँचा आयोगको वेबसाइटबाट र आयोगको कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने छ ।
आयोगले माघ ९ गतेका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन गर्दैछ ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाका १९ जनाको कार्यकाल आगामी फागुन २० गते सकिँदैछ । रिक्त १९ सदस्यमध्ये १८ जना निर्वाचनको माध्यमबाट चयन हुनेछन् भने बाँकी एक जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने प्रावधान छ । सदस्यको पदावधि सकिनु ३५ दिन अगावै निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रियसभाका सदस्यको पहिलो पटक एक तिहाइ सदस्यको पदावधि दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको छ वर्षमा पदावधि समाप्त हुने व्यवस्था छ ।
को को बाहिरिँदै छन् ?
पहिलो दुई वर्षे कार्यकाल पूरा हुने सदस्यहरुमा सरिता प्रसाई, सुरेन्द्रराज पाण्डे, हरिचरण शिवाकोटी, रामप्रीत पासवान, बिन्दादेवी आले, वृषेशचन्द्रलाल, बद्रीप्रसाद पाण्डे, बलरामप्रसाद बाँस्कोटा, मीना बुढा, मुक्ताकुमारी यादव, डा युवराज खतिवडा, युटोल तामाङ, रमेशप्रसाद यादव, राजकुमार यादव, दुर्गाप्रसाद उपाध्याय, धनकुमारी खतिवडा, कमलाकुमारी ओली, कालीबहादुर मल्ल र खेमराज नेपाली छन् ।
अर्थमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रियसभा सदस्य डा. युवराज खतिवडाको स्थानमा भने राष्ट्रपतिबाट एक जना मनोनित हुनेछन् । फागुन २० मा कार्यकाल पूरा गर्ने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा))का नौ, नेपाली काँग्रेसका सात, राजपाका दुई र समाजवादी पार्टीका एक जना सदस्य छन् । राष्ट्रियसभा सदस्य चयनमा गाउँपालिका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको मेयर÷उपमेयर र प्रदेशसभा सदस्यले मतदात गर्न पाउने छन् ।
२७ मंसिर २०७६, शुक्रबार ०९:४८ मा प्रकाशित